Ma dhamaado Caashaqu!! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka November 9, 2015	0 266 Views
Xeebta Jaceylka, Soomaaliya – Maalin ayaa waxaa is jeclaaday wiil iyo gabar dhalin yaro ah. Wiilku wuxuu kasoo jeeday qoys sabool ah. Marka gabadha waalidkeeda aad uguma faraxsaneyn. Sidaas darteed, wuxuu isku dayay inuu dhaqan wanaag iyo hannaan wacan kula fal-galo gabadha iyo waalidkeeda. Jeer waxaa timid ugu danbeyn ay si mid ah waalidku u jeclaadaan wiilka. Waayo waxay arkeen wacnaantiisa. Waxayna is tuseen inuu yahay hal-doorka ku habboon inantooda.
Hayeeshe, waxaa kale oo jiray dhibaato kale. Wiilku wuxuu ahaa daljir. Wuxuu ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka. Durba waxaa qarxay dagaal. Waxaana loo diray inuu jiidda hore ka dagaallamo. Toddobaad kahor intaanu tegin, wuxuu ku joogsaday jilbihiisa isaga oo gacalisadiisa oranaya; “Xubbi sow isma guursan doono?!” Way ku ooysay maqalka oraahdiisa waxayna ku tiri; “Haa”. Wayna is mehersadeen. Waxayna ku heshiiyeen inay wada aqal-galaan kolka uu kasoo laabto jiidda hore sanad kadib.
Hayeeshe, dhibaato ayaa dhacday. Maalmo kadib tegistiisa, gabadhii waxay gashay shil. Madaxa ayaana dhaawac darani kasoo gaaray. Markii ay kasoo baraarugtay sariirta isbitaalka dusheeda, waxay aragtay hooyadeed iyo aabaheed oo ilmaynaya. Way ogaatay inay wax jiraan. Wax yar kadib waxay garwaaqsatay in dhaawac uu kasoo gaaaray qeybta maskaxda; taas oo suureysa muruqyada wajigeeda ayaa dhaawacmay. Wajigeedii mar ahaa il-qabad ayaa doorsoomay. Way ooysay kolkii ay iska aragtay billadayaha. “Shalay waad qurux badneyd maantana waad fool xun tahay.” Oogadeeda ayaa sidoo kale waxaa hareeyey nabarro badan.
Markaas iyo meeshaas, waxay ku go’aansatay inay ka tala-baxdo balantii ay la gashay gacaliyaheeda. Waxay is tustay inaanu in badan sidaan kusii jeclaan doonin hadduu arko. Waxayna iska-dhaadhicisay inay is-ilowsiiso oo aysan dib danbe u arkin.
Halkii sano gudihiisa, Daljirkii wuxuu usoo qori jiray dhanbaallo badan isaga oo mar mar xittaa soo wici jiray. Hayeeshe, war-celin xaggeeda marna kamaanu helin.
Hayeeshe, sanad kadib, hooyadeed ayaa usoo gashay qolkeeda iyada oo ogeysiinaysa inuu saaxiibkeed kasoo laabtay jiidda hore. Gabadhii ayaa ku tawaawacday “Maya! Fadlan ha u sheegin arinteyda. Hana u sheegin inaan halkan ku sugahanay.”
Hooyadii ayaa ku tiri “Wuxuu rabaa inuu guursado.” Waxayna gacanta ka saartay warqaddii casuumaadda.
Qalbigii inanta ayaa halhaleel u quusay. Way ogaatay inay wali jeceshahay. Balse ay hadda qasab tahay inay iska ilowdo.
Iyada oo niyad-jabsan ayay warqaddii furtay. Waxayna magaceedii ka heshay warqadda.
Iyada oo jah-wareersan ayay hooyadeed ku tiri: “Waa maxay kani?”
Markaas waxay aheyd goorkii uu saaxiibkeed soo galay qolka isaga oo sida rucub ubaxyo ah. Wuxuu—inta dhinaceeda jilba dhigtay mar labaad ku yiri—“ Ma is guursannaa gacaliso?”
Gabadhii waxay wajigeeda ku qarisay gacmaheeda. Waxayna ku tiri “Aniga waan fool xumaaday!”
Wiilkii ayaa ku yiri “Ogeysiin la’aantaada ayay hooyadaa iigu soo dirtay sawiradaada. Waxaana garowsaday inaysan jirin wax is-badalay. Waxaa tahay wali gabadhii aan ifka ugu jeclaa. Wali waad qurux badan tahay. Waayo anigaa ku jecel had iyo jeer.”
Warbixintan waxaa ku deeqay Siciid Xasan Shariif. Waxaana af-rogay bahda Himilonews.com.
Previous: Waji walba wuxuu tebiyaa sheekadiisa
Next: Daadad saameeyey Soomaali badan
Nin Muslim ah oo dadka baahan lacag la’aan ku quudiya
Gabar Muslimad ah oo su’aal adag weydiisay Musharax Donald Trump